Caruuraha hiboda badan oo taageero dheerad ah la siinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruuraha hiboda badan oo caawimaad dheeraad ah la siinayo. sawir: Hasse Holmberg/TT
Caruuraha hiboda badan oo taageero dheerad ah la siinayo
"Caruuruhu wey kala duwan yihiin"
La daabacay onsdag 7 september 2016 kl 11.32
Caruuraha ka hiboda badan caruuraha kale ayaa la doonaya in la taageero marka ay yaryar yihiin ee ay dhigtaan dugsiga xanaanada. Sidaas ayuu u jeeda ururka maamullada degmooyinka iyo gobollada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno SKL.
Cilmi baadhiis amuurtan laga sameeyay ayaa u jeeda in caruuraha hiboda badan mushkiladooyin badan kala kulman iskuulka, madama ay dareemayaan in casharka loo dhigayo yahay mid fudud oo ay hore u fahmeen.
Sanadyadii ugu dambeeyay ayey heeyada iskuulada waddanka, Skolverket, soo saartay straatajiyo u fududeeyna macaliiminta si ay caruurahan wax u bari lahayeen. Kuwan ayey heeyadani dabeetana u dirtay iskuulada waddanka.
Hasayeeshe ayey SKL hadda u jeedan in caruuraha dugsiga xanaanada dhigta ee ka hiboda badan caruuraha kale taageero dheeraad ah la siiyo si ay u dareemin in waxbarashada iskuulka ahin mid aan micno laheen.
-Waa in caruur kasta awooda uu leeyahay wax lugu baro, caruurto isku mid maaha, ayey sheegtay Elisabeth Mellroth oo ka hawlgasha SKL.
Borås ayaa ka mid ah degmooyinka istratajiyadda la soo saaray SKL.
-Waa in caruur kasta awooda ay leeyahiin iyo sida ay iyagu u jecelyihiin in wax lugu baro xooga la saaro. Sidaas ayey sheegtay Carina Holmström oo madax ka ah iskuulka Ängsjögården ee magalada Borås ku yaala.